Mas labo gees leh oo lagu arkay dalka Tanzania.(daawo sawiro) - iftineducation.com
iftineducation.com – Mas aan hore noociisa dunida loogu arag ayaa lagu arkay dalka Tanzania iyadoo uu maskan yahay mid midabkiisu yahay hurdi iyo madow, maskan ayaa indhihiisa waxa ay yihiin kuwo cagaaran halka uu labo gees oo yaryar leeyahay.
Maskan ayaa loogu magac daray gabar yar oo 7sano jir ah isagoo loo bixiyey Matilda’s Horned Viper, maskan oo labo sano kahor lagu arkay koonfur galbeed Tanzania ayaa toddobaadkan lagu soo daabacay wargeyska Zootaxa isagoo lagu tilmaamay inuu yahay noocii ugu dambeeyey mas ah ee dunidan lagu arko.
Tim Davenport, oo ah agaasimaha Urur ilaaliya deegaanka oo ka dhisan dalka Tanzania ayaa ka mid ahaa saddex ruux ee ugu horeeyey ee arka maskan. Waxaana loogu magac daray gabar uu dhalay Tim oo hadda 7 sano jir ah.
”Gabadhayda oo 5sano jir ahayd markii ugu horeysey ee aan aragno maskan ayaa jeclaatay waxayna waqti badan ku qaadataa inay daawato maskan waxayna naga caawisaa sidii aan u xanaaneyn lahayn maska. ,”ayuu Davenport u sheegay wakaalada wararka ee The Associated Press maanta. “Waxaan ugu magac darnay Matilda’s Viper.”
Illaa saddex nooc oo masas noocan oo kale ah ayaa soddonkii sano ee ugu dambeysey lagu arkay qaarada Afrika.
Ururkan haatan gacanta ku haya maskan ayaan sheegin halka ay ku xanaaneynayaan.
Davenport ayaa sheegay in uusan hubin inta mas oo noocan oo kale ah oo dunida ku nool basle waxa uu sheegay in ay hayaan oo ay xanaaneynayaan si ay u bataan illaa iyo labo iyo toban mas oo noocan ookale ah.
Davenport ayaa ah nin ka soo jeeda dalka ingiriiska hase yeeshee waxa uu ku noolaa dalka Tanzania muddo 12 sano ah,waxana uu sheegay in dadka oo ka cabsada masaska balse ay masasku badankood yihiin qaar aan waxyeello geysan.
Daawo Sawirada Maska
Mas Labo Gees Leh